[Ukara] Wondershare TidyMyMusic: Hichaa iTunes Library
Ebuli gị Music gbasara mkpokọta na One Click
Gbalịa Ọ Free N'ihi Ohere 10/8/7 / Vista / XP Buy Ugbu a
Otu n'ime ihe m kpọrọ asị kasị banyere ibudatara na dọwara music na-ịbụ enweghị ike ịhụ album nkà ọ bụla nke m songs. TidyMyMusic hụrụ tọn album nkà m nke na-eme m collection eche n'ezie zuru ezu ma hazie.
Ọ na-arụ ọrụ! Nke a software bụ n'ezie mfe ma kensinammuo, na ọ mere oké ọrụ maka ihe m mkpa! -Ekele gị, Wondershare!
M na-eji TuneUp tupu, ma mgbe ha wee si na azụmahịa, m Switched onye nke a, nke m na-ahụ nnọọ mfe iji na ndị ọzọ fun na na na. Ezigbo ọrụ!
M nwere dị ka 8K songs m collection, a software mere a mara mma mma n'anya ọrụ na gwara ndị niile a na-efu kpọọ. M ike ugbu a hazie m niile music collections mfe karịa mgbe. DAALỤ NKE UKWUU!
Ọ bụ dị ka a amara! N'ezie anya ịhụ na m 3000+ songs na iTunes ọkọdọ ofu nnọọ ka na.
M nnọọ wanna asị, a na ngwa bụ ibu jụụ! My iTunes ugbu a na-achọ mara mma onwunwu na ndị niile na CD-ekpuchi na ebe!
Nchekwa onwe-Idozi iTunes Music Data
TidyMyMusic bụ ihe kasị mma iTunes Companion maka nhicha gị music collection. Iji ya elu now mkpisiaka technology, ya ngwa ngwa Fixes efu ma ọ bụ etịbe music Ama n'ime gị iTunes song collection gụnyere artist aha, album nkà, genre, lyrics, na ndị ọzọ.
Idozi Ne na Mislabeled Music Tags
Ekwu goodbye ka imetosi iTunes na song aha dị ka "Track01, Track02 ...". Na ọ dịghị ihe "Unknown Artist". Zuru ezu song aha na-ese ọmụma bụ nanị otu-pịa pụọ.
Ndenye Find Ne Album osise
Ka TidyMyMusic brighten gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na mbụ album artwork, na-enye gị music collection pụtara visual mkpesa.
Ọcha gị Music Library Ozugbo maka All Devices
The emelitere song ọmụma, emi odude ke ID3 mkpado, na-agbakwunyere n'ime MP3 faịlụ ozugbo ọ zọpụta, ime ka ị nyefee na ịkọrọ gị music na-akparaghị ókè ngwaọrụ mgbe ọ ka na ịnọgide na-enwe ya emelitere music mkpado ọmụma.
A ezigbo oge dijitalụ audio edekọ na dere ọ bụla ọdịyo isi iyi ahụ na-akpaghị aka achọpụtala na kọmputa gị. Mụtakwuo